Ihe omuma na ihe omuma nke James Hutton maka geology | Netwọk Mgbasa Ozi
Na geology enwere ndi oka mmuta nke gbanwere uzo anyi si ahu uwa na uwa anyi. Otu n’ime ndị sayensị ahụ gbanwere otú ndị mmadụ si eche echiche banyere ụwa anyị a bụ James hutton. Ọ bụ ọkà mmụta banyere ala nyere anyị echiche banyere oge miri emi. Ọ bụ nwoke hụrụ obere nwanyị, ụmụ nwanyị n'anya, na-ewepụta echiche ọhụrụ iji soro ndị ọgbọ ya kwurịta ya. N'agbanyeghị na ọ gụsịrị akwụkwọ na ahụike, ọ nwere nnukwu mmasị na ntọala ụwa na ụwa nkịtị. Ma, dị ka anyị hụwororị na sayensị na mmepe ya, a na-achọpụta ihe kachasị ukwuu site na ịchọ ihe ọzọ na-abụghị ihe a chọpụtara, ma ọ bụ ndị na-abụghị ọkachamara na isiokwu ahụ.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị akụkọ ndụ na ihe mmetụ nke James Hutton tinyere nnukwu onyinye ya na sayensị na geology.
1 Akwụkwọ Nsọ na geology
2 Nnukwu usoro ụwa
3 Oge eziokwu
Akwụkwọ Nsọ na geology
Have ga-eche n'echiche na n'oge ochie enweghị ọtụtụ teknụzụ iji nwee ike nyochaa mbara ala anyị. N'oge ahụ, naanị akwụkwọ geology bụ Akwụkwọ Nsọ. N'oge ndị ahụ, a kwenyere na ọ maara kpọmkwem ụbọchị Chineke kere ụwa, Ọktoba 22, 4004 BC.
Ọ bụ ezie na James Hutton nwere okwukwe na Chineke, o kwenyeghị n’echiche inwe nkọwa nkịtị nke Bible. O kwenyere na Chineke kere ụwa mana o nwere usoro nke iwu okike.
Nwunye ya tụụrụ ime ma kpọga ya na Lọndọn ka ọ mụọ nwa. Mgbe ọ dị afọ 26, a manyere Hutton ibi ndụ ọzọ na ugbo ezinụlọ dị na ndịda Scotland. Ọ bụ n'ubi ahụ ka echiche ya banyere mbara ala nwetara ume na mkpa na ndụ ya. Ebe ala ubi ahụ bụ ebe ikuku na-ekpokarị, mmiri na-ezo, na ihu igwe na-adịghị mma, ọ ghaghị ime ka ugbo ahụ ghọọ ihe na-abaghị uru. A manyere ya igwu ma hichaa ọwara mmiri dị iche iche na-adịgide adịgide ka o wee nwee ike ịdịgide.
Ebe ọ bụ na olulu ndị ahụ bupụrụ ala e ji akọ ihe, mbuze na-aba ụba. N’ihi ya, James Hutton malitere ichegbu onwe ya banyere ala mbuze dị otú ahụ ma malite iche na ọ bụrụ na mbuze a na-aga n’ihu otú a ruo ogologo oge, a gaghị enwe ala ebe a ga-akọ nri n’ime afọ ndị a. Nke a mere ka o chewe na Chineke kere ụwa ka ọ ghara ịdị ọcha n'anya oge. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya. Dị ka ya si kwuo, Abasi ekenyene ndinam ekondo emi edifiakde ikara.
Nnukwu usoro ụwa
N'ịbụ onye nwere mkpa maka towa ka ọ nwee ike imeghari onwe ya ma ọ bụghị ikpe ọnwụ nke ndị agụụ na-agụ, ọ malitere ịmụ otú o si maliteghachi. Ala mbuze dika ihe omumu banyere ala ọ bụ mgbanwe nke mbibi, ugbu a ọ ghaghị iburu n'uche ihe ha wuru.
Ihe dị iche ụdị nkume nke ahụ Hutton mụrụla ma ghọta na ha dị ihe mmiri na-ebupụta mmiri na nke ahụ, site n'afọ ruo n'afọ, n'ụzọ dị nnọọ nwayọọ, A tụkọtara ha ọnụ ka ha ghọọ okwute. Site n'ọmụmụ ihe na ngwụcha oge, ọ ghọtara na ụwa nọ n'ọnọdụ dị n'etiti mbibi na ihe owuwu yana na nke a adabereghị n'ihe omume dị egwu na mberede dị ka Akwụkwọ Nsọ kwadoro, kama ọ bụ nsonaazụ nke afọ. Nke ahụ bụ, waswa sitere na mkpọmkpọ ebe site n'oge gara aga.
Mbido ya biri mgbe ọ dị afọ iri anọ na otu, ya mere, ọ laghachiri n’obodo ntorobịa ya. Ọ bụ mgbe ahụ Ọchịchị Scottish Enlightenment. Edinburgh bụ ebe ọgụgụ isi kasị maa mma, Hutton jikwa ya mee ihe. Ọ nyochara ma mara na ọ bụghị nkume niile nwere ngwugwu nke ihe mkpo, kama, ụdị nkume dị iche iche nwekwara ọnọdụ dị iche iche.
Ọ bụ enyi ya, James Watt, mere ka ọ nwee ike ịmụtakwu ihe. Nwoke a bụ onye na-echepụta igwe ọkụ ma mee ka mgbanwe mgbanwe nke ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma. Ya mere, Hutton na-eche ụdị okpomoku ahụ na-eri. Nke a bụ otú o si bụrụ nwoke mbụ chere na etiti ụwa bụ ebe na-ekpo ọkụ ma na-enwu ọkụ. Ugwu ugwu ahụ abụghị nanị ebe ikuku si n’oké mmiri ahụ miri emi.
Ihe a niile mere ka o chee na e mere ụdị nkume ndị ọzọ na nnukwu ọkụ a dị n’ime ya nke nyere ọdịdị ha mgbe ha jụrụ n’elu ala. Na ihe a niile, ọ bịara ịkwado ụzọ abụọ nke ịmepụta ala:
Site na mmiri nke ndi oru dika mmiri ozuzo, ikuku, ugbo njem, mbuze. Ọ malitere ịrị elu nkume.
N’ime ụwa, n’oké okpomọkụ, a na-eji nkume ndị gbazere agbaze agbaze. Nke a na-eme nkume dị egwu.
N'ịbụ onye na-eche echiche banyere mgbanwe, ndị enyi James Hutton mere ka o kwuo ya n'ihu ọha. Na 1785, o bipụtara ya na Royal Academy na Edinburgh. N'ịbụ onye ụjọ na ịghara ịbụ ezigbo ọkà okwu, A jụrụ nkwupụta ya ma were ya dị ka onye ekweghị na Chineke.
Nke a egbochighị ya na nyocha ya. Hutton gara n'ihu na-enyocha gburugburu gburugburu Scotland ma chọpụta na a wụọla granite na mbụ. Nke a bụ otu o si gosipụta na e nwere nnukwu injin na-ekpo ọkụ n'ime ụwa. Ihe ndia nile bu ihe akaebe na hadwa nwere nnukwu usoro mbibi na owuwu.
N'agbanyeghị nke a, afọ ejughị ya ma chọọ ịchọpụta ma waswa ọ bụ naanị puku afọ ole na ole dịka Akwụkwọ Nsọ kwuru maọbụ tọọ ya. Ọ hụla ụfọdụ akụkụ kwụ ọtọ n'akụkụ osimiri ahụ, ma ọ maara na mgbe e mesịrị nkuku ahụ gbanwere. Ọ bụ ezie na amaghị m nke ahụ efere tectonics tiori nwere ike ikwubi nke ahụ ọ bụ ọmụmụ na ọnwụ nke ụwa niile. Ọ bịara ghọta na ụwa kere ma mebie eriri ala na nke a bụ otú usoro ahụ si na-aga n'ihu.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, James Hutton nyere onyinye dị ukwuu na sayensị, ọ bụ ezie na okpukpe anabataghị ya nke ọma. Ọzọkwa anyị ghọtara na naanị ihe okpukpe mere bụ igbochi mmụba sayensị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » James hutton